Slash - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်မရှိသည့်ချောမောသောခြေကျင်း - အရှည်ပါးလွှာ Brwon အမျိုးသမီးဝတ်ဒီဇိုင်းခုံရှည်ကို ၀ ယ်ပါ WoopShop®
Slash နှင့်အတူချောမောကျောရိုးအရှည်ပါးလွှာ Brwon အမျိုးသမီးဝတ်ဒီဇိုင်းဘောင်းဘီ
$74.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $93.99
ဘရောင်း / S / တရုတ် ဘရောင်း / M / တရုတ် ဘရောင်း / L / တရုတ် ဘရောင်း / XL / တရုတ်
ချောမောသောခြေကျင်းဆံပင်အပါး - အညို - အညိုရောင်အမျိုးသမီးဝတ်ဒီဇိုင်းဘရောင်း - ဘရောင်း / S / တရုတ် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
S: Bust ၈၄ စင်တီမီတာ၊ ခါး - ၆၈ စင်တီမီတာ၊ တင်ပါး - ၁၀၀ စင်တီမီတာ၊ ပခုံး - ၄၃ စင်တီမီတာ၊ အလျား - ၁၃၇ စင်တီမီတာ
M: Bust ၈၈ စင်တီမီတာ၊ ခါး - ၇၂ စင်တီမီတာ၊ တင်ပါး - ၁၀၄ စင်တီမီတာ၊ ပခုံး - ၄၄ စင်တီမီတာ, အလျား - ၁၃၈ စင်တီမီတာ
L: Bust 92cm၊ ခါး - ၇၆ စင်တီမီတာ၊ တင်ပါး - ၁၀၈ စင်တီမီတာ၊ ပခုံး - ၄၅ စင်တီမီတာ, အလျား - ၁၃၉ စင်တီမီတာ
XL: အညစ်အကြေး ၉၆ စင်တီမီတာ၊ ခါး - ၈၀ စင်တီမီတာ၊ တင်ပါး - ၁၁၂ စင်တီမီတာ၊ ပခုံး - ၄၆ စင်တီမီတာ, အရှည် - ၁၄၀ စင်တီမီတာ
173.5 စင်တီမီတာ၏အမြင့်တွင်perfectlyုံ XL ထိုင်တော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်သည်ထိပ်ဆုံး ၄၄-၄၆၊ နိမ့် ၄၆-၄၈ ကို ၀ တ်ဆင်သည်။ ကြည့်ကောင်းတယ် အထည်အနည်းငယ် crumples
စူပါအလွန်ခါး CA အရောင် Tez အလုံအလောက်အစာရှောင်တင်ပို့လိုပဲ
ခြုံငုံဗုံးကြဲလေပြီ။ ငါမလုပ်ခဲ့ဘူး ထိုပွဲတော်နှင့်ကမ္ဘာ၌။ အမြင့် 164 နှင့်အရွယ်အစားတွင် 42-44 တွင်အမ်ဝယ်သင့်တယ်အဖြစ်ထိုင်! အဝတ်သိပ်သည်။ ငါအရမ်းပျော်တယ်!
အလွန်ကောင်းမွန်သောပေါင်းစပ်မှုအရွယ်အစား S သည်အောက်ခြေတွင် ၃၂ ၃၄ နှင့်ထိပ်ဆုံးတွင် ၃၆ ခုအတွက်သင့်တော်သည်
အလွန်မတ်စောက်သော, ဖြောင့်မီးသူမ၏ s ကိုတွင် M နှင့်ကောင်းစွာယူခဲ့ပါတယ်